fafan'i modo tsikelikely ny sujet-ko !!!
Date: 14 septembre 2017 - 10:48
sahala am lé mpamafa trano tsy ahitan-doto ireny nefa ny kifafa eny antanana dia :
- fafafafana ihany na ny madio aza fa :
>> leo ny mipetra-potsiny !!!!! lol
Re: fafan'i modo tsikelikely ny sujet-ko !!!
Date: 14 septembre 2017 - 10:53
manao asa fanadiovana ihany koa ve i modo???
Date: 14 septembre 2017 - 11:16
Par: menatra à
Date: 21 septembre 2017 - 13:36
àry aiza zao le sujet oe menatrà Jesosy malala
Menatrà Jesosy malala
Menatrà fa mitono valala
Menatrà fa mifoka jamala
Menatrà fa miditra bara
Menatrà fa mivadika adala
Date: 21 septembre 2017 - 14:46
ndao hanao rakitra ho an'i modo dia tsy fafany tsony ny sujet . izaho volontaire hitantana ny vola .
Date: 21 septembre 2017 - 15:40
Raha mbola tsy fantatry belapin foana fa izy no mpandefa rivotra ato dia tena vôtrisy marina izy
Date: 21 septembre 2017 - 17:11
Tokony entina ambavaka i Avobenohonylanitra fa efa lasa miteny irery !!!
Date: 12 octobre 2017 - 09:42
Mamaky baiboly nefa miompy devoly
Vao natao mariage nefa misipa @ i Soazy